Home News Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya Dad kudhintay shil Gaari oo ka...
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya Dad kudhintay shil Gaari oo ka dhacay Soomaaliland
Wararka aan ka heleyno duleedka Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Somaliland ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay Shil gaari oo sababay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Shilkaan ayaa waxaa uu ka dambeeyay, kadib markii gaari ay la socdeen xubno ka tirsan Shaqaalaha dab demiska Somaliland oo ku socday xawaare sare uu halmay wadada dhinac uga baxay, sidaasina uu ku rogmaday.
Ugu yaraa laba ruux ayaa ku geeriyootay Shilka,halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo ka tirsanaa Shaqaalaha dab demiska Somaliland, iyagoona kusii jeeday Magaalada Berbera.
Dadka deegaanka ayaa tegay halka uu gaariga ku rogmaday, iyagoona gurmad deg deg ah u sameeyay dadkii halkaas ku waxyeeloobay, waxaana dhaawacyada soo qaaday dhanka Magaalada Hargeysa.
Wadada u dhexeeysa Magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa waxaa dhowr sidaan oo kale uga dhacay Shilal kala duwan oo geystay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.